Doogee Y200, phablet vaovao $ 159 | Androidsis
Alfonso de Frutos | | Finday, About us
Doogee Izy io dia mitantana ny manao zana-kazo eny an-tsena noho ny sandan'ny vola azo avy amin'ny vokatra. Andro vitsy lasa izay dia nasehonay anao a famerenana horonantsary feno momba ny Doogee HOMTOM HT7Fotoana izao hiresahana modely hafa iray izay vao tonga teny amin'ny tsena.
Ary ny Doogee Y200 dia efa misy amin'ny fivarotana an-tserasera izao, phablet vaovao avy amin'ny mpanamboatra aziatika izay misongadina, toy ny mahazatra amin'ny marika, noho ny vidiny tery: $ 159.
Toetra ara-teknikan'ny Doogee Y200
Amin'ny fandrefesana ny 155.5mm avo, 77.1mm lava ary 6.9mm ny sakanyAnkoatry ny lanjany 170 grama, lehibe ny Doogee Y200, izay lojika raha jerena ny haben'ny efijery.
Ary ilay phablet vaovao an'ny mpanamboatra monina ao Shenzhen dia nampiditra tontonana IPS 5.5 santimetatra mahatratra ny famahana HD (1280 x 720 teboka). Eo ambanin'ny saron'ity fitaovana ity no ahitantsika mpikirakira MediaTek MTK6735, SoC quad-core izay mahatratra ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandro hatramin'ny 1 GHz, ankoatry ny fananana Mali - T720 GPU ary fahatsiarovana RAM 2 GB, mihoatra ny ampy hanaovana hetsika misy fandaharana na lalao video ankehitriny milamina.
Ny iray amin'ireo fampiasana lehibe indrindra an'ity fitaovana ity dia ny fampisehoana ny atiny multimedia, noho izany dia zava-dehibe tokoa ny fananan'ny terminal fahatsiarovana anatiny. Ary manana izany ny Doogee Y200. Porofon'izany ny azy ireo 32 fahatsiarovana anatiny. Toa vitsy aminao ve izy ireo? Eny, manana slot hanitarana ny fitadidiany amin'ny alàlan'ny karatra micro SD izy, ka amin'ity lafiny ity dia tsy hanana olana ianao.
Ny fakantsary lehibe dia misy sensor valo megapixel miaraka amin'ny autofocus, na dia amin'ny alàlan'ny rindrambaiko fanodinana aza dia mahavita maka tahaka ny sary 13 megapixel izy, raha ny fakantsary eo aloha kosa dia manana solomaso 5 megapixel ary amin'ny alàlan'ny rindrambaiko fanodinana azy dia maka tahaka sary 8 megapixel.
Na eo aza ny vidiny mirary, ny Doogee Y200 dia manana mpamaky sidina, manararaotra ny fisintomana ireo sensor biometrika. Ny batterie 3.000 mAh dia toa somary rariny hanohanana ny lanjan'ny fitaovana rehetra, na dia tsy maintsy miandry aza isika hamakafaka azy hahitantsika ny fomba fitondran-tenany amin'ny resaka fizakan-tena.
Farany, mariho fa ny Doogee Y200 dia manana fanohanana Dual SIM (mampiasa karatra SIM micro) ankoatry ny fiasana amin'ny Android 5.1 L.
Raha te hividy an'ity fitaovana mahaliana ity ianao dia afaka mahita azy io tsy misy olana be loatra amin'ny ankamaroan'ny fivarotana sinoa an-tserasera. Ahoana ny hevitrao momba ny Doogee Y200, phablet vaovao an'ny mpanamboatra aziatika?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Doogee Y200, phablet misy sensor misy ny dian-tànana latsaky ny 150 euro
Ahoana ny fametrahana ny Play Store amin'ny RemixOS